Maitiro ekuchinjisa mafoto kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo pa Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo pane Android
Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo pane Android Zvinodiwa kuti chinjana zvirimo zvako iCloud Garari kuGoogle Mifananidzo? Ziva kuti Apple yagadzira chishandiso chitsva kuita kuti maitiro ese ave nyore uye akananga, pasina matanho anonetesa. Ngatitsvakei pamwe chete.
Chinjana mapikicha kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo
Chinjana iCloud Mifananidzo kuGoogle Mifananidzo paAroid Izvo zvaive zvichitokwanisika, asi zvaida isiri inonyanya kufadza maitiro: inogona kuiswa kuburikidza neiyo yepamutemo Google Mifananidzo app pane iOS, asi inova nzira isinganetse kune avo vanofanirwa kuendesa iripo iCloud raibhurari. Pano, zvadaro, Apple inouya kununura nebasa idzva.
Maitiro Ekuchinjisa Mapikicha kubva kuICloud kuenda kuApp Uchishandisa Google Mifananidzo
Kumbira kuendesa kopi yemifananidzo nemavhidhiyo akachengetwa muICloud Mifananidzo kuGoogle Mifananidzo haisi yekukurumidza uye haibvise kana kushandura zvirimo: maitiro zvinotora mazuva matatu kusvika manomwe, panguva iyi Apple inosimbisa kuti chikumbiro izvo chaizvo zvakaitwa nemuridzi akakodzera weakaunzi.
Chero zvazvingaitika, imwe data uye mafomati anogona kunge asingawanikwe ekuchinjisa, senge Smart Albums, Live Mifananidzo, kana RAW mafaera (ona iyo inotevera ndima).
Saka chiiMaitiro Ekuchinjisa Garari kubva kuICloud kuenda kuGoogle Mifananidzo? Kutanga application unofanirwa:
Saina neApple ID yako pane zvakavanzika.apple.com
Sarudza "Chinjana kopi yedata rako"
Tevedza iyo-skrini mirayiridzo kuti upedze iyo application
Iwe unozobva wada pinda muakaundi yako yeGoogle kuti utange kuchinjisa. Iwe unobva wagamuchira email ziviso uye, mukati memazuva mashoma, yechipiri ziviso iyo inokuzivisa iwe nezve kupedzisa maitiro. Basa idzva rakagadzirwa neApple rinowanikwa munyika dzeEuropean Union, Italy, Switzerland, United Kingdom, Norway, Iceland neLiechtenstein, zvirinani izvozvi.
Mafomu Akatsigirwa eCloud Kutamisirwa kuGoogle Mifananidzo
Sezvakataurwa na Apple pachayo muchikamu chakatsaurirwa kutsigira, mapikicha uye mavhidhiyo anotamiswa (kana zvirinani, kuteedzerwa) pane yako fomati yekutanga kana mumafomati akajairwa. Heino runyorwa rwevanotsigirwa: kana iwe usingakwanise kuwana zvese zvemukati, ziva kuti chikonzero chingave chiri kumashure kwemafomati asina kuiswa mune anotevera.
.jpg, png, webp, .gif, mamwe mafaira eRAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, 3g2,. mp4, .m2t, .m2ts, .mts uye .mkv
Google Photos, ICloud
Maitiro ekumisikidza Twitter nzira yakasviba yeApple